उपचार निःशुल्क हुन सकेन, दाहसंस्कार समेत सशुल्क « Naya Page
उपचार निःशुल्क हुन सकेन, दाहसंस्कार समेत सशुल्क
प्रकाशित मिति : ५ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०६:३८
काठमाडौं, ५ जेठ । गत वर्ष कोभिडका नाममा १२ अर्ब खर्च गरेको सरकारले यसपालिको बजेटमा ६ अर्ब बिनियोजन गरेको छ । अझ, चार अर्ब रुपैयाँ कुनै पनि बेला खर्च गर्न सकिने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले सुनिश्चित गरेको छ ।
कोभिड महामारीबाट मृत्यु भएमा अन्त्येष्टि निःशुल्क गर्ने भनेर सरकारले घोषणा गरेको एक वर्ष भयो । चितवनको देवघाटमा दाहसंस्कारका लागि पैसा किन उठाउने गरिएको हो ? यो त गैरकानुनी भएन र ? पीडितमाथि शोषण भएन र ? हाम्रो प्रश्नमा सिडिओ लामिछानेले भने, ‘गत चैतसम्म सेनाले नै अन्त्येष्टि गर्थ्यो, तर जलाउने होइन, गाड्ने गरिएको थियो । गाड्नका लागि खाल्डो खन्न महानगरले जेसिबी दिएको थियो, तर चैतबाट जलाउन थालिएको छ । जलाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएका छौँ,’ उनले स्पष्टै भने ।
शव ¥यापिङ गरेको १३ हजार पाँच सय, घाटसम्म शव पुर्याएको एम्बुलेन्स शुल्क चार हजार, समाधिस्थलमा चार हजारलगायत गरेर २८ हजार शुल्क तिरेको मृतककी पत्नीले बताइन् । उनले आफ्नो नाम सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेकी छिन् । अस्पतालले बाँकी औषधि समेत फिर्ता गर्न नमानेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘अस्पतालबाट किनेको करिब ५० हजारको औषधि थियो । तर, उहाँ (श्रीमान) को मृत्युपछि औषधि फिर्ता गर्न समेत मानेन ।’ महामारीमा अस्पतालहरूले मनपरी शुल्क असुलिरहेको उनको गुनासो छ ।
मानव अधिकार परिषद् प्रदेश १ का अध्यक्ष थापाले संक्रमितको शव निःशुल्क व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘खै त निःशुल्क भएको ? सेनाले घाटसम्म शव ल्याउने काम मात्र ग¥यो । बाँकी सबै खर्च त आफैँले व्यहोर्नुपर्दो रहेछ,’ उनले भने ।